‘कलामा युग परिवर्तन गर्न सक्ने दिव्य शक्ति हुन्छ’ - JamarkoOnline
होमपेज / मनोरञ्जन / सृजना / ‘कलामा युग परिवर्तन गर्न सक्ने दिव्य शक्ति हुन्छ’
‘कलामा युग परिवर्तन गर्न सक्ने दिव्य शक्ति हुन्छ’
मङ्गलबार, असार १६, २०७७ , जर्मर्को अनलाईन
सरोजा खड्गी। नेपाली चित्रकला क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो यो। मोरङको पथरीमा बसेर सिर्जना गर्ने सरोजाले सानै उमेरदेखि चित्र बनाउन थालेकी हुन्। उनले बनाउने सन्देशमूलक चित्रहरु निकै लोकप्रिय छन्।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञासभा सदस्य समेत रहेकी उनका सिर्जना देश-विदेशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन समेत भइसकेको छ। ‘एभरेष्ट आर्ट फ्युजन कला’ संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष तथा ललितकला संगम विराटनगरको सल्लाहकारलगायत विभिन्न संस्थामा उनको आवद्धता छ।
विभिन्न समयमा पुरस्कृत पनि भएकी सरोजाले कला क्षेत्रमा आर्जन गरेको ख्याति लोभलाग्दो छ। सुनसरीको सिमरियामा जन्मिएकी बिष्णुप्रसाद खड्गी र मीनादेवी खड्गीकी छोरी सरोजाले बीएसम्म अध्ययन गरेकी छन्। प्रस्तुत छ, उनीसँग ‘नेपाल टच’ ले गरेको कुराकानी-
केही महिनायता सबैको दिनचर्या फेरिएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ अचेल?
घरको काम, समाचार हेर्ने, चित्र सिर्जना गर्ने अनि बेला बेलामा पुस्तक पढेर समय बित्दै छ।
चित्रकलामा कसरी रुचि जागेको हो?
सानैदेखि चित्रकलामा रूचि थियो। बुबा पनि सिर्जनशील हुनुहुन्थ्यो। मेैले अक्षरभन्दा अघि चित्र कोर्थें पाटीमा। माटोमा। मेरा हरेक कापीमा चित्र कोरिएका हुन्थे। यसरी नै कलामा आकर्षित हुँदै रुचि बढ्दै गयो।
कस्ता विषय आफ्नो सिर्जनामा व्यक्त गर्नुहुन्छ?
विशेष गरी समाजमा रहेका विकृति, विभेद, दमनविरूद्ध सन्देशमूलक चित्र बनाउँछु। विशेष नारी आकृतिका चित्र कोर्छु।
कलाका अरु विधामा पनि काम गर्नुहुन्छ?
चित्रकला बाहेक पनि कलासँगै सम्बन्धित काम गर्छु। सेरामिक कलामा मेरो रुचि छ। सेरामिकका विभिन्न सामग्री बनाउने गरेकी छु।
हालसम्म कति जति चित्र बनाउनुभयो होला?
बच्चा बेलादेखि आजसम्म चित्र बनाउँदै आएको हुनाले अनगिन्ति होलान् भन्छु। थाहा पाएदेखि लगातार बनाइरहेकी छु।
तपाईँका चित्रका विशेषता केलाई मान्नुहुन्छ?
खासगरी सन्देशमूलक, नारी सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित चित्र सिर्जना गर्ने गर्छु।
चित्रहरुको प्रदर्शन कहाँ कहाँ गर्नुभएको छ?
जापान, दार्जिलिङ, दिल्ली तथा नेपालका धेरै जिल्लामा एकल, सामूहिक तथा अनेकौ पटक स्थानीयस्तर, प्रदेश स्तरीय अनि राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा सहभागी भएकी छु। कतिपय स्थानमा धेरैपटक पुरस्कृत हुन पाउँदा खुसीसँगै उत्साह बढेको छ।
कला पारखीबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी छु। पारखीहरुको प्रशंसा र प्रतिक्रियाले अझ अघि बढ्न, कतिपय बेला सुधार गर्न प्रेरणा मिल्ने गरेको छ।
आफ्ना कलाकृतिहरु बिक्री गर्नुहुन्छ?
विभिन्न समयमा कलाकृतिहरु बिक्री पनि गर्दै आएको छु। पारखीहरुले आफ्नो रुचिअनुसार कला किन्ने गर्छन्। प्रदर्शनीमा अनि घरबाटै पनि चित्र बिक्री गर्दै आएकी छु।
कला सम्बन्धी तालिम पनि लिनुभएको छ?
काठमाडौंस्थित सिर्जना कन्टेम्पररी आर्ट ग्यालरीबाट चित्रकलाको १० महिने लिएको छु। अनि सेरामिकको एक महिना लामो तालिममा सहभागी भएकी छु।
आफूमा भएको कला नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ?
११ वर्ष उर्लाबारीमा रहेको पशुपति सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कुलमा अध्यापनका क्रममा चित्रकला प्रशिक्षण गरें। त्यसपछि ‘एभरेष्ट आर्ट फ्युजन’ नामको कला संस्थामार्फत चित्रकला प्रशिक्षण दिंदै आएकी छु। १० वर्ष पूरा भयो र बेला बेला सेरामिकको तालिम पनि दिंदै आएका छौं। यसैको परिणाम पथरी सेरामिक उद्योग स्थापना भएको छ। केही बेरोजगारले रोजगारी पाउन थालेका छन्।
नेपाली चित्रकलाको स्तर कस्तो पाउनुहुन्छ?
नेपाली चित्रकलाको स्तर राम्रो छ। धेरै विकास भएको छ। कलाकारहरु पनि पछिल्लो समय निकै बढेका छन्।
खासमा कला के हो?
मलाई लाग्छ, कला सुन्दर अनुभूति हो। मानवीय संवेदनालाई जीवन्त राख्ने समय दर्पण हो। कलामा युग परिवर्तन गर्न सक्ने दिव्य शक्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
कलाले मानिसको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
अवश्य पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। मानवभित्र सकारात्मक सोच तथा ऊर्जा मिल्नुको साथै हरेक क्षेत्रमा सिर्जनशीलता ल्याउन कलाले महत्वपू्र्ण भूमिका निवाह गर्छ।
कलाको संरक्षणका निम्ति के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
म सम्पूर्ण नेपालीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– हाम्रो आफ्नो मौलिक, कला, संस्कृतिको प्रवद्र्धन, कदर, उजागर गर्दै स्वदेशी सिर्जना तथा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर दैनिक प्रयोगमा ल्याऔं। आफ्नो राष्ट्रलाई गरिमामय अनि समृद्ध बनाउन सबै जुटौं।
साभार ः नेपालTouch